Warshad Taxane Soosaarka Cadka Maro Maro Marooji ah - Soosaarayaasha Cuntada Maro Maro Maro Maaradeed iyo Alaab
Nooca OK-250 Nooca Laba Laydh Xawaaraha Sare Khadka Khadadka Soosaarka Cadka
Waxqabadka Ugu Muhiimsan Iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka 1.Adopt Qaab-dhismeedka iyo qaabeynta "U", si isdaba joog ah isugu laaban iyo xirmo, muuqaal qurux badan, habka xirxirida oo siman, qaab dhismeed deggan oo la isku halleyn karo. Xakamaynta xasilloonida joogtada ah ee waraaqda ceyriinka ah ee socota, xawaaraha qaanuunka wax-ka-beddelka ah ee unugyada 3.Adopt BST warqad ceyriin ah oo toos ah dib u saxid toos ah, nooc yar iyo nooc xirmo xirmo ah ayaa lagu dabaqi karaa. Maamulaha 4.Programmable-ka si uu si adag u xakameeyo, kuna shaqeeyo shaashad taabasho ah, oo leh shaqada di ...
Nooca OK-150 Cadka Maro Nadiifinta Khadka Khadka Tooska ah
Waxqabadka Ugu Muhiimsan Iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka 1.Adopt Qaab-dhismeedka toosan iyo qaabeynta tooska ah, si isdaba joog ah isugu laaban iyo xirxirida, muuqaalka quruxda badan, habka xirxirida oo siman, qaab dhismeed deggan oo lagu kalsoonaan karo Xiisad joogto ah ayaa xakameysa warqadda ceyriinka ah ee socodsiisa, xawaaraha qaanuunka wax-u-nadiifinta ee unugyada. 3.Adopt BST warqad ceyriin ah oo toos ah dib u saxid toos ah, nooc yar iyo nooc xirmo xirmo ah ayaa lagu dabaqi karaa. 4.Programmable xakamaynta si aad u xakameyso, ku shaqeyso shaashadda taabashada, wi ...
OK-120 Nooca Xawaaraha Sare Khadka Line-soo-saarka Cadka
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka 1.Adopting Qaab-dhismeedka Tooska ah, Laabashada joogtada ah, baakadaha, Muuqaalka quruxda badan, baakadaha jilicsan, qaab dhismeedka adag ee la isku halleyn karo. 3.Adopt BST warqad ceyriin ah oo toos ah dib u saxid toos ah, nooc yar iyo nooc xirmo xirmo ah ayaa lagu dabaqi karaa. Xakamaynta 4.Programmable si aad u xakameyso, ugu shaqeyso shaashad taabasho, oo leh shaqada soo bandhigida fai ...
Ok-402 Nooca Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Cadka
Waxqabadka Ugu Muhiimsan Iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka Mashiinkaan waxaa loo isticmaalaa duubitaan si otomaatig ah u ah nooca caadiga ah iyo noocyo yar yar oo shaashadda gacanta ah (isku soo uruurinta). Waxay adeegsaneysaa nidaamka xakamaynta is-dhexgalka aadanaha ee PLC, mashiinka adeegga wuxuu xakameynayaa daadinta filimka iyo qeexitaanka filimka lagu daadinayo ayaa lagu hagaajin karaa heer kasta. Mashiinkan, iyada oo loo marayo bedelida qaybo kooban, wuxuu awoodaa inuu sameeyo xirmada maro kala duwan oo cabbirkoodu kala duwan yahay (kuwaas oo ah faahfaahin kala duwan). Model & Para Para Technical ...
Nooca OK-602M Nooca Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Cadka
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka Waxaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan oo baakado kala duwan ah, illaa 3 tiirar × 4 lakab × 6 baakado yaryar, fudud si loola qabsado, koontaroolka adeegga buuxa, marka lagu daro beddelidda caaryada, ficilada intiisa kale waxay noqon karaan lagu hagaajiyay qaybta qalliinka. Moodel & Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah Model OK-602M Qaabdhismeedka muuqaalka guud ee jirka (mm) 3700x1160x1780 Xawaare (bacaha / min) 1 saf 3 lakab: 90 bac / min 2 saf 3 lakab: 60 boorso / min 3 saf 3 lakab: 40 boorso / min ...